Inta badan warshadaha SEO waa gadaal | Martech Zone
Inta badan Warshadaha SEO waa gadaal
Waxaan dhagaysanayaa webinar hadda Dhiciyaan Search Engine (SEO) waana iga xanaaqday. Qiyaasta ugu horreysa ee looga hadlay webinar waa dood ku saabsan imisa xiriiriye istiraatiijiyad la soo saaray, iyo mugga ereyada muhiimka ah taas oo la geeyay istiraatiijiyadda.
Dood la'aan isbeddelka. Dood la'aan ku habboon. Dood la'aan dhagaystayaasha. Dood la'aan horumarinta. Wadahadalku waa mid fudud sida aad halkaas ugu tuuri karto wax xun iskuna day inaad ka hesho xiriiriyeyaal badan intii aad kari karto kheyraad kasta si aad kor ugu qaaddo darajooyinka ereyada muhiimka ah ee aadka loo tartamo. Maxaad kaliya astaanta astaantaada ugu sameysaneysaa qof dabadiisa oo aad ku tuurtaa Youtube-ka? Waxaad ka heli doontaa taraafiko badan oo aan khuseynin habkaas, sidoo kale… waxaana macquul ah inay ka qiimo jaban tahay.
Waxaan wali ka gaarnay suuq geynta dijitaalka hadana marwalba waxaan dib ugu noqonaa xeelado xariifnimo. Istaraatiijiyad duug ah oo ah kubbado badan oo indhaha ah ayaa wali ku sii socota dhibaatada suuqa. Khuraafaadku waa inaad qof walba ku soo jiidanayso bartaada… kooxdaas gudaheeda waxaad ka heli doontaa qof. In ka badan iyo in ka badanba waxaan aragnaa istiraatiijiyaddii oo guuldarreysatay, laakiin suuqleydu had iyo jeer dib ayey ugu noqdaan. Kubado badan oo indhaha ah ayaa la mid ah ganacsi badan.
Run maahan. Waana sababta ay shirkadaha u maalgashan karaan suuq geynta gudaha SEO.
Weli waan layaabay tirada dadka iyagu iska iibiya khabiirada SEO laakiin xitaa ma daryeesho sida booqdayaasha internetka ay yihiin loo beddelay macaamiil. Kahor intaysan waligood lahadlin macmiilka, waxay eegaan qiimeynta, waxay raadiyaan dhamaan keywords keywords, waxayna u tuuraan qiime qaali ah oo ku saabsan sida ay u weerarayaan. Waa hab xun oo gabi ahaanba gadaal u socota.
Haddii aad tahay shirkad caan ku ah internetka, adiga horay hayso xog ku saabsan halka ay meheraddaadu ka soo galayso khadka tooska ah. U fiirso ma aanan dhihin meesha aad gaadiidka ayaa ka imanaya. Waxaan ku iri meesha aad ganacsi ayaa ka imanaya. Taasi waxay ka dhigan tahay dib u eegistaada Analytics dhacdooyinka, yoolalka iyo beddelka u horseedaya himiladaada oo u horseedaya inay noqdaan macmiil.
Inta badan taraafikada aad heshaa kuma jiraan qeybtaas… marka maxaad u danaynaysaa inaad booqashooyin badan ka hesho booqdayaasha aan waligood ganacsi kula samayn doonin? Xaqiiqdii, qaar ka mid ah dadkaas waxay macluumaadkaaga la wadaagi doonaan dadka kale - taasi waa wax weyn. Laakiin taasi waxay dhacdaa oo keliya markaad wax wadaagto waxyaabaha laxiriira dhageystayaasha saxda ah.
Haddii aad ka shaqeyneyso hagaajinta mashiinka raadinta, waxaad u baahan tahay inaad ku bilowdo adoo aqoonsanaya ereyada muhiimka ah ee keena natiijooyinka… ka dibna gadaal u shaqee. Ma leedahay darajo dhexdhexaad ah oo ku saabsan ereyada muhiimka ah ee kuwa iibka kuu keenaya? Ku bilow inaad ku hagaajiso bogaggaas ereyada muhiimka ah si iibkaagu u kordho. Caadi ahaan, kuwani waa dabo dheer mana ahan wax adag in laga shaqeeyo.
Hada waxaad wadid natiijooyinka ganacsiga halkii aad kaheli lahayd kubbadaha indhaha oo dadaalkaaga SEO ayaa wax tari doona.
Anatomy ee Going Viral
feker ahaanteyda, habka ugu wanaagsan ee lagu garto ereyada muhiimka ah ee natiijooyinka u horseedi doona seo, waa in lagu bilaabo waxyar oo olole ah adwords google si loo tijaabiyo waxqabadka keywords fudayd iyo sida dadku si fiican ugu aqoonsan karaan ganacsigeyga khadka tooska ah. 1 bil kadib waxaad heli kartaa xog kugu filan si aad ugu fiicnaato natiijooyinka dabiiciga ah.
Hab weyn oo runtii si fiican u shaqeeya! Mararka qaarkood macaamiisheennu nama siinayaan ikhtiyaarkaas - laakiin waxaan inta badan isku daynaa inaan kala hadalno arrintaas! Waxaad ku tijaabin kartaa boqolaal ama kumanaan isku dhafan adoo adeegsanaya PPC. Waad ku mahadsan tahay intaa